युवाहरूमा हृदयघातको जोखिम किन बढ्दैछ ? कोडिओलजिस्ट डा. सन्तोष कुमार डोरा – Sajha Pati
हृदयघातका समस्याहरू सामान्यतया पाको व्यक्तिहरूमा हुन्छन् । यद्यपि, विगत केही दशकहरूमा युवाहरूमा, हृदयघातको समस्या छ । एउटा अनुसन्धानले देखाए अनुसार टाइप २ मधुमेह भएका मानिसहरूलाई हृदय रोगको जोखिम बढी हुन्छ । रगतमा उपस्थित चिनीको अधिक मात्राले रक्त वाहिकाहरू र नसाहरूलाई समयको साथै खण्डन, रक्त परिसंचरण प्रणालीलाई बिगार्न सक्छ । यो स्वास्थ्यको लागी धेरै हानिकारक हुन सक्छ ।
युवाहरूमा हृदय रोगको बढ्दो घटनाका लागि जिम्मेवार महत्वपूर्ण कारकहरू मध्य प्रथम उच्च रक्तचाप नै हो । उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ । व्यायामको अभाव, ट्रान्स फ्याट र नुन, मोटापा, तनावको बढेको स्तर, धूम्रपान र मदिरा सेवन जस्ता बानी युवा वयस्कहरूमा उच्च रक्तचापको उच्च घटनाको प्रमुख कारणहरू हुन् । यदि रक्तचापको स्तर उच्च छ भने, स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, मुटुको विफलता, मिर्गौलामा असफलता र आँखा कमजोर जस्ता गम्भीर समस्याहरू हुन सक्छन् ।
अर्को हो उच्च कोलेस्ट्रोल । कोलेस्ट्रोल शरीरको लागि एक महत्त्वपूर्ण जैविक तत्व हो । तर शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा उच्च स्तर भयो भने पनि हृदय रोगहरू देखा पर्दछ । मुटुको धमनीहरू सहित शरीरमा रक्त वाहिकाहरू पनि त्यसमा शामेल हुन्छन् । यी धमनीहरूमा कोलेस्ट्रोलको अत्यधिक संचय हुजुको कारण रगत प्रवाहमा कमी हुन सक्छ । नतिजा एनजाइना वा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुनसक्छ ।
त्यस्तै अर्को कारण हो धुम्रपान । मानिसहरू जो धूम्रपान गर्छन् उनीहरूलाई हृदय रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै, धुम्रपानले अरूलाई समेत यसको शिकार बनाउँछ, विशेष गरी बच्चाहरूलाई । राम्रो स्वास्थ्यबाट जोगिन र हृदय सम्बन्धी रोगहरूको सम्भावना कम गर्न एक व्यक्तिले हरेक अर्थमा धूम्रपान त्याग्नु पर्छ ।
हृदय घातको मोटोपना पनि एक कारण हो । मोटोपनाले कार्डियोवास्कुलर बिरामी हुने जोखिम बढाउँछ । वर्ल्ड हार्ट फेडरेशनका अनुसार अत्यधिक तौलका व्यक्तिलाई उच्च रक्तचाप, टाइप २ मधुमेह र मस्कुलोस्केलेटल डिसआर्डर हुने खतरा बढी हुन्छ भने वायु प्रदूषण त झन मुटुको लागि घातक नै हो । विस्तृत अनुसन्धानका अनुसारमा समेत रक्तचापको स्तर वातावरणको कारण परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । वायु प्रदूषणलाई विभिन्न हृदयका समस्याहरु जस्तै हृदयघात अध्ययनका अनुसार प्रदूषित हावाको जोखिमले हृदयघातको समस्याको जोखिमलाई दोब्बर बनाउँछ ।
विशेष गरेर पारिवारिक इतिहास पनि हृदयघातको कारण हुन सक्छ । वर्ल्ड हार्ट फेडरेशनका अनुसार परिवारमा उपस्थित कुनै पनि सदस्यलाई हृदयको समस्या भइसकेको छ भने हृदय परिवारका अन्य सदस्यहरुमा समस्याहरूको जोखिममा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । उदाहरण को लागी, यदि तपाईको परिवारमा कसैको ५५ को उमेरमा हृदयघात भएको हो अथवा थियो भने त्यस्ता सदस्य को हृदय समस्याहरुको संभावना पचास प्रतिशत अधिक हुन सक्छ ।
मुटुको स्वास्थ्यको सुधारको लागि विभिन्न उपायहरू गर्न सकिन्छ जस्तै
१. तपाइँको पारिवारिक इतिहासको बारे मा थाहा छ वा छैन पहिला निश्चित गर्नुहोस् । यो जान्न महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंको भाइबहिनी, आमाबुबा वा हजुरबा हजुरआमालाई हृदय रोग थियो र उनीहरू कति वर्षका थिए जब उनीहरूलाई यी समस्याहरू देखा परेका थिए ।
२. तपाईंको लिपिड प्रोफाइल, रगतमा चिनीको स्तर र रक्तचाप नियमित रूपमा जाँच्नुहोस् । वर्षको कम्तिमा एक पटक सम्पूर्ण शरीर जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ ।
३. प्रत्येक हप्ता कम्तिमा १५० मिनेट एरोबिक व्यायाम गर्नु आवश्यक छ ।
४. चुरोट नखाउ अरूले गरेको धुम्रपान धुवाँबाट पनि आफुलाई बचाउने गर्नुहोस् । उपचार र प्रभावकारी औषधिहरूको लागि धूम्रपान छोड्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस् ।
५ . सम्पूर्ण अनाज फाइबर, पातलो प्रोटिन, रंगीन फल र तरकारीहरू, फलफूल र दालहरू, कम फ्याट खानाहरू जस्तै माछा र कुखुराको मासु खानुहोस् । तत्काल र प्याकेज गरिएको खाना, जंक फूड, चिनी र नुनको अत्यधिक सेवनबाट बच्नुहोस् ।
६. तपाईंको परिवार र साथीहरूको लागि समय दिनुहोस् । घरमा कार्यालयको काम नगर्न कोसिस गर्नुहोस् । समय समयमा परिवारका लागि बिदा लिनुहोस् । तपाईको विश्वासिलो साथीहरु र जीवनसाथी संग आफ्नो तनावको कारणको बारेमा कुरा गर्नुहोस् । मनोचिकित्सकको पनि परामर्श लिनुहोस् ।
(डाक्टर सन्तोष कुमार डोरा, वरिष्ठ कोडियोला‘जिस्ट, एशियाई हार्ट संस्थान, मुम्बई ।)